TANY ETSY ANDOHATAPENAKA : Toherin’ny mpanolotsaina monisipaly mpanohitra ny letrezan’ny Kaominina | NewsMada
Fiarabe nitondra mpandeha 64 nivadika: vehivavy bevohoka sy lehilahy iray maty, 24 naratra ...octobre 23, 2019
Projet Tana Masoandro : un terrain d’entente trouvé ...octobre 23, 2019
Projet Tana Masoandro : un terrain d’entente trouvé
Fiarabe nitondra mpandeha 64 nivadika: vehivavy bevohoka sy lehilahy iray maty, 24 naratra
Approvisionnement en carburants : des stations-services en panne sèche
Fahatapahan’ny hisatra : 3 maty, 9 naratra nodonin’ny fiarabe mpitondra fasika
Fafa Mahaleo: une grande voix s’est éteinte à jamais
Misaona ny zavakanto, lavo ny andrarezina: nodimandry i Fafa ao amin’ny tarika Mahaleo
Baccalauréat – Antananarivo : la délibération à 10/20
« Raharaha Ambohitrimanjaka »: ahina ny ain’ilay zandary, Basy iray tsy hita
Fifandonana teny Ambohitrimanjaka: zandary 4 naratra mafy, olona 9 voasambotra
Surpopulation carcérale : usage abusif du mandat de dépôt
TANY ETSY ANDOHATAPENAKA : Toherin’ny mpanolotsaina monisipaly mpanohitra ny letrezan’ny Kaominina
Par Freenews sur 02/02/2017
Tsy manaiky ny kiantranoantrano ireo mpanolotsaina monisipaly mpanohitra eo anivon’ny Kaominina.
Manoloana ny fitantanana gaboraraka sy ny kiantranoantrano eo anivon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra momba ny tany etsy Andohatapenaka, namondron-kery ireo mpanolotsaina monisipaly eo anivon’ny fanoherana. Hiakatra fitsarana ny zoma izao, ny raharaha anoherana ny fanapahan-kevitry ny Kaominina Antananarivo renivohitra…
Ho tohin’ny fitoriana napetra-dRavololomanana Lalatiana tamin’ny 20 septambra 2016, mahakasika ny fanafoanana fangatahana fanapahan-kevitry ny Kaominina, momba ny nanomezan’ny orinasa Tiko ny tany etsy Andohatapenaka ho an’ny Kaominina, hanaovana fampiantsonana fiara. Nampiantso mpanao gazety, omaly, tetsy Behoririka ireo mpanolotsaina monisipaly mpanohitra eo anivon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra namaky bantsilana ireo tsy fetezana ny fitantanan-draharaha. Nilaza Rakotondrazafy Lalatiana filohan’ny antoko Freedom fa « tsy maintsy avondrona ny hery iadiana ny gaboraraka sy ny kiantranoantrano amin’ny fitantanana ny Kaominina Antananarivo renivohitra, miaraka amin-dRavolomanana Lalatiana, mba ho an’ny tombontsoam-bahoaka ».
Manoloana ny fanapahan-kevitry antoko maro anisa eo anivon’ny mpanolotsaina monisipalin’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana, ny 29 jolay 2016, nanapahana ny hanomezan’ny orinasa Tiko ho an’ny Kaominina ny tany etsy Andohatapenaka. Nanambara Ravololomanana Lalatiana fa « natao letrezana sy kiantranoantrano ny fandaniana azy io teo anivon’ny filankevitra monisipaly. Tsy ara-dalàna io satria tsy tao anaty tetiandron’io fivoriana io ».
Araka ny fantatra, io tany eo Andohatapenaka io, mbola tsy ara-dalàna satria mbola mifanolana amin’ny fanjakana ny orinasa Tiko. Nampiaka-peo ny avy eo anivon’ny mpanolotsaina monisipaly avy amin’ny mpanohitra fa karazany atao fitaovana izy ireo. « Tsy ara-dalàna ny ataon’ny ben’ny Tanàna sy ny mpitantana ny orinasa Tiko. Lasa ampifangaroana ny raharaham-pianakaviana amin’ny fitantanana orinasa sy ny raharaham-panjakana », hoy hatrany Ravololomanana Lalatiana.
Manoloana izay tsy fanarahan-dalàna izay, nanambara ny mpisolovava Ravonison Tsiferana avy amin’ny antoko Freedom miaro ny mpanolotsaina monisipaly mpanohitra fa « hiakatra fitsarana rahampitso eo anivon’ny Fitsarana ny ady amin’ny fanjakana etsy Anosy, ity raharaha ity ». Nohazavainy fa io rafi-pitsarana io no mahefa afa-mitsara momba ity ady ity. « Tafiditra ao anatin’izany ny fangatahana fanafoanana fanapahan-kevitra lah 14/CUA/CM/del/16, tamin’ny 29 jolay 2016 teo, momba ny fanomezan’ny orinasa Tiko ny tany ho an’ny Kaominina hanaovana fiantsonan’ny fiara. Efa nisy famaliana ity raharaha ity nataon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra, ny 4 novambra 2016, saingy hitohy rahampitso ny fifandaharana eny anivon’ity Fitsarana ny ady amin’ny fanjakana ity.
Fiarabe nitondra mpandeha 64 nivadika: vehivavy bevohoka sy lehilahy iray maty, 24 naratra 23/10/2019
Projet Tana Masoandro : un terrain d’entente trouvé 23/10/2019
Taom-piantsana 2019-2020: hitondra ny « Mahatsangy » ny Faribolana Sandratra 23/10/2019
Taratry ny kanto 23/10/2019
Toetrandro: ho maina ity herinandro ity 23/10/2019